Chad: Askarta 7 la dilay iyo 15 oo ku dhaawacmay weerar cusub oo Boko Haram ah - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Chad: Askarta 7 la dilay iyo 15 oo ku dhaawacmay weerar cusub oo Boko Haram ah - JeuneAfrique.com
"Argagixisada ayaa weeraray ciidamada habeenbadhkii magaalada Bouhama agagaarka Kaigakindjitia ee degaanka Lake Chad", ayuu yiri Colonel Cesem Bermandoa, afhayeenka ciidanka, isagoo sheegay in "argagixisada ayaa lagu dilay 63 ". Wasiirka Gaashaandhiga dalka Chad Daoud Yaya Brahim iyo Chief of Staff of Taher Qalabka Sida Erda ayaa la geeyay 15 Monday April "qiimeeyaan xaaladda", sida uu sheegay Colonel Cesem.
Madaxa dhawaan loo magacaabay ee Shaqaalaha Ciidanka Qalabka, Taher Erda waa saaxiib dhow oo madaxweyne Idriss Deby Itno. Wuxuu bedelay Brahim Seid Mahama 22 bishii Maarso ee la soo dhaafay. Waxa uu la ceyriyay ka dib markii weerar ay Boko Haram ee koonfur-galbeed ee dalka, taas oo askari Chad 23 ayaa la dilay, mid ka mid ah weeraradii ugu badnaa soo gaaray ciidanka tan iyo bilowgii ah la dagaalanka Islaamiyiinta.
Soo noqoshada weerarrada
Gobolka Lake Chad ayaa ah goob lagu soo bandhigo weerarro soo cusboonaadey oo ay soo qaadeen Boko Haram. Warbixintii dhawaan la sii daayay, Xiriirka Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha (FIDH) ayaa ka welwelsan dib u soo noqoshada weerarrada ay qaadeen kooxda jihaadiga ee gobolka Lake Chad, gaar ahaan dhinaca kooxda Chad. "Chad, ayaa si aad ah uga welwelsan khatarta Boko Haram ka dib weerarrada dhimashada ee 2015, mar kale waa diiradda kooxda argaggixisada tan iyo bartamihii 2018," ayuu yiri warbixinta.
Tan iyo bishii Juun 2018, ugu yaraan todobo weerar oo Boko Haram ah ayaa ka dhacay degaanka Chadian, halkaas oo dagaalyahannada jihaadiga ah ee Nigerian ayan ku dhowaadan wax soo faragelin dhawr bilood. "The hanjabaad Boko Haram ka dhanka ah Chad waa mid aad u xun oo laga naxo laba sano oo is dajiyaan kadib markii," ayaa sidoo kale keentay Madaxweynaha Chad League ee Xuquuqda Aadanaha (LTDH), Me Midaye Guerimbaye, warbixin la mid ah.
The ciidamada Boko Haram, kuwaas oo bilaabay in 2009 waqooyi-bari Nigeria, ayaa sheegay in in ka badan dhimashada 27 000 1,8 oo milyan oo Dadka Gudaha Ku Barokacay ee dalka, oo ku guuleystay Niger, Chad iyo Cameroon deriska ah. April 10, Diffa, oo ah magaalada ugu weyn ee koonfur bari ee Niger, ayaa waxaa lagu dilay jihaadiyeyaasha Nigeria. Dalka Cameroon, ugu yaraan todoba askari ayaa la dilay tan iyo bilawgii bishan waqooyiga dalka, halkaas oo loo diro si looga hortago weerarrada kooxda jihaadka.
Tan iyo markii 2015, wadamada gobolka ayaa la dagaallamaya Boko Haram ee Ciidanka Wadajirka ah ee Isku-dhafka ah (MMR), oo ah isbahaysi goboleed oo ku hawlan gobolka Lake Chad iyada oo gacan ka heleysa guddiyada foojignaanta ee muwaadiniinta maxalliga ah.